Waa Kuma Xiddiga Heshiiska Shanta Sanno Ah La Gaaray Arsenal Balse Ay Tottenham Dooneyso Inay Ka Afduubato Saxiixiisa? - Gool24.Net
Waa Kuma Xiddiga Heshiiska Shanta Sanno Ah La Gaaray Arsenal Balse Ay Tottenham Dooneyso Inay Ka Afduubato Saxiixiisa?
Tottenham ayaa isku dayaysa inay Arsenal ka afduubato saxiixa daafaca kooxda Saint-Etienne William Saliba.
18 jirkaan ayaa ogolaaday heshiis shan sannadood ah oo uu u saxiixayo Gunners laakiin labada kooxood ee Arsenal iyo Saint-Etienne ayaan weli heshiis ka gaarin saxiixiisa.
Si kastaba Tottenham ayaa isku dayaysa waqti danbe inay ka afduubato Arsenal saxiixa daafaca Faransiiska iyagoo u soo bandhigaya dalab ka qaalisan kan ay u bandhigtay Gunners.
Spurs waxa ay ka gudbisay dalab la mid ah kii ay Arsenal gudbisay ee 30ka milyan euro laakiin waxaa la socda lacago dheeri ah oo ku xiran qaab ciyaareedka daafaca. Si kastaba, Arsenal ayaa weli kalsooni ku qabta in ciyaaryahanka uu balanta ka soo bixi doono oo uu iyaga ku biiri doono.
Labada kooxood ee Waqooyiga London ka dhisan ayaa doonaya daafacyo cusub. Tottenham ayaa waxaa xagaagan ka tagi kara Toby Alderweireld xagaagan iyadoo Roma ay xiiseyneyso saxiixa xiddiga reer Belgium halka Arsenal ay ka baqeyso inay xilli ciyaareedka ku bilowdaan Laurent Koscielny la’aantiis ka dib markii uu diiday isbuucaan inuu kooxda la safro isagoo doonaya inuu baxo.
Heshiiska ay Arsenal ku dooneyso William Saliba ayaa ah mid uu u saxiixayo xagaagan laakiin xilli ciyaareedka danbe uu amaah ugu laabanayo kooxda Saint-Etienne.
Laakiin qorshahaas ayaa isbedeli kara madaama mustaqbalka Koscielny aan la hubin, waxaana Arsenal ay ku qasban tahay inay degdeg ka dhigto saxiixiisa ka hor inta aysan Tottenham la wareegin xiddigaan.